November 2020 – Myanmar
ပုရစ်ကြော် ၁၀ ကောင်လောက်စားပြီးနာရီဝက်အတွင်းယားပြီးနီရဲလာတာနဲ့ ဆက်မစားရဲတော့ဘူး စားပွဲပေါ်က ပုရစ်ကြော်ဘူးကို ညကျ ပုရွက်ဆိတ်တက်လာတယ် နောက်နေ့ သေနေတဲ့ ပုရွတ်ဆိတ်အပုံသာကြည့်တော့ဘယ်လောက် ပိုးသတ်ဆေးတွေသုံးပြီး ဖမ်းထားလဲ မသိဘူး လူစားရမဲ့ ပုရစ်ကို ပိုးသတ်ဆေးသုံးပြီး ဖမ်းသတ်တယ်ဆိုတော့ ပြောစရာမရှိတော့ဘူး လူလည်း အခုထိလည်း နေလို့မကောင်းဘူး ZawGyi ပုရစ္ေၾကာ္ ၁၀ […]
ခွေးတွေဟာ လူတွေအတွက် သစ္စာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါ။ ခွေးလေးတွေကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပြီး မေတ္တာပြခဲ့ရင် သူတို့လေးတွေဟာ အသက်ကိုတောင် မငဲ့ပဲ လူတွေကို ကျိုးနွံစွာ ပြန်လည်စောင့်ရှောက်တတ်ပါတယ်။ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ တာမိုလီပက်စ်ပြည်နယ်က ဂက်စ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလည်း လမ်းဘေးခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ လူသားတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သစ္စာစောင့်သိမှုကို အခုလိုတွေ့ရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြုံလှီနေရှာတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ဟာ ဂက်စ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နားကို […]
ပေါင်တံလေးတွေ သေးပြီးမလှချင်တဲ့သူရယ်လို့တော့မရှိပါဘူးနော်…ပေါင်တင်သွယ်လျချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအားကစားနည်းလေးတွေက တော်တော်လေးကို အကျိုးရှိစေမှာပါ… 1. Frog bridge 2. Squats 3. Double pulse squat jumps 4. Lunges 5. Gate swings 6. Diamond kicks 7. Plié squats […]
သြစတေးလျ Brisbane က ရှောပင်းစင်တာရှေ့မှာ အမိုက်စား proposal လေးတစ်ခုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်အမျိုးသား Motonori Kan ဟာ မေလ ၅ရက်နေ့က (၅)နှစ်ကြာတွဲလာတဲ့ ချစ်သူဖြစ်သူ Emi Miyazaki ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာပါ။လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပွဲလေး အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်အောင် Mad Dance House က dancer […]
အမြွာပူးမွေးတာက တစ်ခါတည်းနဲ့ နှစ်ယောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ဘက်က ပြန်တွေးရင် ခေါင်းကိုက်စရာ လူသတ္တဝါလေးနှစ်ယောက် တစ်ပြိုင်နက်ရောက်လာတာပါပဲ။ အပြင်လောက ရောက်ရင် ဘယ်လိုလဲမသိပေမဲ့ အမေ့ဗိုက်ထဲမှာတည်းက ရန်ဖြစ်နေတဲ့ အမြွာညီမနှစ်ယောက်ကတော့ အင်တာနက်မှာ ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးမိခင်လောင်းတစ်ယောက်ဟာ အာထရာဆောင်းရိုက်စဉ်မှာ ဗိုက်ထဲက အမြွာလေးနှစ်ယောက်က အချင်းချင်း ထုရိုက်ကန်ကြောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုး မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အမြွာလေးတွေရဲ့ အဖေ […]
လမ်းပိတ်နေတဲ့ ကားလမ်းတစ်ခုမှာ ဝက်ရူးပြန်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို သူဘယ်လိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့…
ထိုင်းနိုင်ငံက ကားအရမ်းပိတ်နေတဲ့ လမ်းတစ်ခုမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဝက်ရူးပြန်နေလို့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ အဖေဖြစ်သူကိုတွေ့တော့ Itthiphon Petchphibunpong ဆိုတဲ့လူက ဆိုင်ကယ်နဲ့ သူတို့ကို ခေါ်တင်ပြီး ဆေးရုံကိုအမြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပိတ်နေချိန် ကားတစ်စီးပေါ်က အကူညီတောင်းနေတဲ့ အသံကြားလို့ သူသွားကြည့်ချိန်မှာ ဒီအဖြစ်ပျက်ကို တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ Itthiphonက ရှေ့ကကားသမားတွေကို […]
တစ်နေ့ မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ် မယ့် သူ ဆိုတာ ဖိနပ် တိုက် သမားဘဝ ကတည်းက အမြင်ကွာ ပါတယ်
တနေ့မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့သူ ဆိုတာ ဆင်းရဲတဲ့ လူငယ်လေး(၃)ဦးဟာ ကျောင်းအားချိန် မှာ ဖိနပ် တိုက်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး အိမ်ကိုထောက်ပံ့နေကြတယ်။တနေ့တော့ သူတို့ ထံကို လူဂုဏ်တန်တစ်ယောက် ဖိနပ်တိုက်ဖို့ ရောက်လာပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ မျက်လုံးအိမ်မှာတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အပြည့်နဲ့ အားလုံးဟာ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ အလုပ်လုပ် နေကြရတဲ့သူ တွေကိုး […]
အပြစ်တင်စကား မပြော ပဲ မေတ္တာထားပြီး ကုသိုလ်ယူ သွား တဲ့ ကားဆရာ အဘကြီး
အပြစ်တင်စကား မပြောပဲ မေတ္တာထားပြီး ကုသိုလ်ယူသွားတဲ့ ကားဆရာ အဘကြီး တကယ်ဆို ဒီအဘကြီးက အဲ့ဒီနားမှာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီချိုင့်ခွက်ကြီးက ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ အားလုံးကသာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်နေကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ အဖက်လုပ်ပြီး ချိုင့်ကြီးကို မဖို့ကြပါဘူး။ အမျိုးသားသွေးဌာနရှေ့သွေးလာလှူတဲ့ ကားတွေရပ်ရင် ဂျိုင့်ကြီးထဲပြုတ်ကျတာ။ သူ့ကြောင့် ထိခိုက်သွားတဲ့ ကားတွေ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အိန္ဒိယက စတင်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ စာတမ်းထုတ်ပြန်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အိန္ဒိယက စတင်ခဲ့တယ်လို့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ စာတမ်းထုတ်ပြန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ မူလအစရင်းမြစ်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ၂၀၁၉ နွေရာသီအတွင်း တူညီတဲ့ရေသောက်သုံးမှုကတဆင့် တိရိစ္ဆာန်တွေကနေ လူသားတွေဆီကို စတင်ကူးစက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီး ဝူဟန်မြို့ကို မရောက်ရှိခင်ကတည်းက ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီလို့ ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ […]